Maitiro Ekusarudza Domain Domain rebhizinesi rako | Martech Zone
Zvinonakidza kufunga kumashure apo ini ndaimbotenga mazita echizinda nguva dzese (ini ndakatotengesa imwe kamwe!) Uye nemabatiro andakaita zvandaizotenga. Isu takangotanga bhizinesi idzva CircuPress uye hatina kana kuzombotumidza zita kambani iyi kusvika tatova nechokwadi chekuti tinogona kuitengera zita rezita racho! Ini ndinofungidzira nguva dzavari kuchinja.
Kana zvasvika pakusarudza zita rezita, kuratidza muyero pakati pezvinhu zvakakosha izvi - kureruka, kuyeukwa, kukosha - ndiyo kiyi yekubata mheni isingabudirire yekubudirira mubhodhoro rako repamhepo.
Ini ndinotenda matemethings achiri kuverenga… madheshi achiri kutaridza kunge spammy uye marefu mazita anofanirwa kunyatsodzivirirwa. Zvakare, kuve wakangwarira kuti iwe usine zvisirizvo zviperengo mukati medome… senge IT Chidimbu at itscrap.com, inofanira kudzivirirwa. WhoIsHostingThis.com isa pamwe iri gwara rakanaka kukubatsira iwe kusarudza yako inotevera domain zita!
Tags: brandingbhizinesi zitasarudza zita renzvimboinotongwa zitainotongwa mazitatsvaga zita renzvimbowhoisostingthis.com
Zvakavanzika zveChitanhatu zveMukati Zvekutapurirana Zvirimo